बहुउपयोगी कोदोको महत्व र नेपालमा यसको सम्भावना - TokhaLive
Home»कृषी / उर्जा »
१२ माघ २०७७, सोमबार ११:१९
बहुउपयोगी कोदोको महत्व र नेपालमा यसको सम्भावना
कोदो नेपालको चौथो मुख्य बाली हो । पहाडी क्षेत्रको मकै पछिको दोस्रो मुख्य बाली हो । यसलाई गरिबको खाना पनि भनिन्छ । किनकी यसको खेती कम मलिलो तथा सुख्खा जग्गामा पनि गर्न सकिन्छ र पहाडि भागमा कम खर्चमा खेती गर्न सकिन्छ । कोदोबाट ढिंडो, रोटी, सातु, लिटो, खोले, पुवा लगायत अन्य परिकार बनाएर खान सकिन्छ । खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले त झन यो ज्यादै महत्वपूर्ण बाली हो । भाते बानीको संस्कृति हुर्केको हाम्रो गाउँ समाजमा कोदोलाई नेपालीहरुको भान्छामा पनि कम महत्व दिने गरेको पाइन्छ । तर, हालका दिनहरुमा यस सम्बन्धि जनचेतना अभिवृद्धि, कोदो भन्दा अरु खाद्यान्न महंगो तथा स्वास्थको दृष्टिकोणले कोदो लाभदायक भएकोले यसको महत्व तथा उपयोगिता दिन प्रति दिन बढ्दै गएको छ । यो मधुमेह बिरमिको लागि पनि उपयुक्त अन्नबाली हो ।
पोषण तत्वको कुरा गर्ने हो भने यसमा क्याल्सियम, कार्बोहाइड्रेड, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, थाईमिन तथा रेशादार वस्तु पाइन्छ । कोदोमा चामल र मकैभन्दा ३५ गुणा अनि गहुँभन्दा ८ गुणा बढी क्याल्सियम पाइन्छ । मैथिलीमा मडुवा, नेवारीमा डुसी, अंग्रेजीमा मिलेट भनिने कोदो प्रोटिन, भिटामिन, ऊर्जा तथा खनिजको प्रमुख स्रोत हो ।
यसलाई भविष्यको स्मार्ट खानासमेत भनिएको छ । सामान्य स्वस्थ व्यक्ति मात्र नभई बालबालीका, गर्भवती, मधुमेह, रक्तचापका बिरामीलाई समेत कोदो खानाले उल्लेख्य फाइदा पुग्ने वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ । केटाकेटी बुढाबुढी र सबैका लागि कोदोको रोटी र ढिंडो सजिल्लै पच्ने भएकोले यो स्वस्थ्यवर्धक पनि छ । धार्मिक हिसाबले हेर्ने हो भने नेवार, गुरुङ, तामाङ लगायतका जनजातिहरुको पूजाआजा चाडपर्वमा यसको प्रयोग हुन अनिवार्य छ ।
कोदो तराईदेखि उच्च पहाडी क्षेत्रसम्म जुनसुकै जलवायुमा पाइन्छ । कोदोको सन्तुलित उपयोगले राम्ररी पोषित भएर स्वस्थ रहन सघाउँछ । पहिले नहुनेले कोदो खाने गरे पनि आजकल हुनेले खान थालेको अवस्था छ । नेपाली समाजमा कोदोको उपयोगलाई कुनै बेला गरिबीको प्रतिकसमेत मान्ने गरिएको थियो । स्थानीय रुपमा तयार गरिएका शुद्ध जाड तथा रक्सि धेरै नेपाली तथा विदेशीहरुले मिठो मानेर पिउने गर्छन् । बजारमा पाइने मदिरा भन्दा सस्तो र स्वादिलो हुने भएकाले पनि होला मानिसहरु कोदोको रक्सी भनेपछि हुरुक्कै हुने गर्दछन् । कतिपयले त साथीभाइलाई कोसेलीको रुपमा लग्ने गरेको पनि पाइन्छ ।
आजभोली त काठमाडौंका तारे होटलदेखि राजमार्गका रेष्टुरा तथा रिसोर्ट र हिमाली क्षेत्रका होमस्टेमा दरिलो स्वागतको रुपमा कोदाको विभिन्न परिकार जाँड तथा रक्सीको प्रयोग हुन थालेको छ । यसबाट वियर पनि तयार हुन्छ । कोदोको नल पशुको लागि राम्रो घाँस पनि हो । यो हरियो तथा सुकाएको दुवै रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसलाई ‘कु’ अन्न मान्ने परम्पराले गर्दा यसको गुण अपहेलित हुँदै आएको छ । नेपालीको खाने चलनमा मुख्य भात नै भएको र यसैमा अत्याधिक निर्भर रहने भएकाले नसर्ने रोगको वृद्धिमा समेत यसले सघाइरहेको छ ।
अफ्रिकातिर कोदोलाई सातुजस्तै फिटेर खाने चलन छ । हाम्रो मुलुकमा पनि यसरी कोदोको उपयोग गरिँदा यसले थप स्वास्थ्यसम्बन्धी फाइदा मिल्न सक्छ । बालबालीकाका लागि बनाइने लिटोमा कोदोको उपयोग गर्दा उनीहरूको विकासका लागि थप टेवा पुग्ने गर्छ । खासगरी गर्भवतीले क्याल्सियमको चक्की खानुको सट्टा दुईवटा कोदोका रोटी खाए पुग्छ । स्तनपान गराउनेहरूका लागि समेत यो दूध बढाउने आधार बन्छ ।
इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ मिलेट रिसर्च (आईआईएमआर्), हैदरावाद, भारतको तथ्य पत्रअनुसार कोदोबाट धेरै लाभ लिन सकिन्छ । महामारीसम्बन्धी अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने, कोदोको उपयोगले मुटु रोगको जोखिम कम हुन्छ, मधुमेहबाट जोगाउँछ, पाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउँछ, क्यान्सरको जोखिम कम गर्छ, शरीरको शुद्घीकरण गर्छ र विषाक्तता हटाउँछ ।
भारतमा कोदोको पापड, भुजिया, स्पागेटी, नुडल्स आदि बनाउन थालिएको छ । कोदोमा अरू पिठो मिसाएर बिस्कुट, पाउरोटी, केक, शिशुका लागि खाद्य पदार्थजस्ता विभिन्न परिकार बनाउन थालिएको छ । यसमा प्रशस्त मात्रामा पोलिफेनल्स, टयानिन, फाइटोस्टेरोल्स लगायतका फाइटोकेमिकल्स पाइन्छन् । यो एन्टिअक्सिडेन्टले समेत परिपूर्ण हुन्छ । मानिसलाई ज्ञात भएसम्म सबैभन्दा पुरानो खाद्य पदार्थमध्ये एक कोदो खाद्य र पोषण सुरक्षाको दृष्टिले महत्वपूर्ण भए पनि सरकार र राज्यले खासै महत्व दिएको छैन ।
इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ मिलेट रिसर्च (आईआईएमआर्), हैदरावाद, भारतको तथ्यपत्रअनुसार कोदोबाट धेरै लाभ लिन सकिन्छ । महामारीसम्बन्धी अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने, कोदोको उपयोगले मुटु रोगको जोखिम कम हुन्छ, मधुमेहबाट जोगाउँछ, पाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउँछ, क्यान्सरको जोखिम कम गर्छ, शरीरको शुद्घीकरण गर्छ र विषाक्तता हटाउँछ । श्वासप्रश्वासको स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रतिरोधक क्षमता बढाउँछ, ऊर्जास्तरमा वृद्घिसँगै मांशपेशी र नशासम्बन्धी प्रणालीमा सुधार ल्याउँछ ।
म्याग्नेसियम अत्यधिक हुने भएकाले यसले विशेष रूपले रक्तचाप कम गर्न, एथेरोस्केलेरोसिसमा मुटुको स्ट्रोकको जोखिमलाई न्यून गर्न सघाउँछ ।
यसले गर्दा ग्यास्ट्रिक अल्सर र कोलोन क्यान्सरको सम्भावनामा समेत कमी आउँछ । यसमा भएको रेसाले कब्जियत, अत्यधिक ग्यासलाई दूर गर्छ । यो रेसाले गहुँ र मकैको आँटा सेवन गर्नेहरूको दाँजोमा इसोफेजियल क्यान्सर हुने सम्भावनामा समेत कमी ल्याउँछ । कोदोको नियमित उपयोगले क्यान्सरको जोखिमलाई समेत कम गर्न सक्छ । यो फेनोलिक एसिड, टयानिन र फाइलेट प्रशस्त भएको खाद्य पदार्थ हो ।
यसले केही प्रकारका क्यान्सर र मुटु रोगबाट समेत जोगाउँछ । कोदोमा उच्च मात्रामा पाइने रेशाले कोलेस्ट्रोल कम गर्नसमेत सघाउँछ । यसले एलडिएल कोलेस्ट्रोललाई कम गर्नुको साथै एचडीएल कोलेस्ट्रोलको प्रभावलाई बढाउँछ । मधुमेह हुनबाट जोगाउन कोदोको उपयोग अत्यन्त फाइदाजनक देखिएको छ । यसमा भएका फाइबर, म्याग्नेसियम, भिटामिन–ई, फेनोलिक यौगिक र टयानिनले मधुमेहको खतरालाई कम गर्छ । किनभने यिनले रगतमा ब्लड ग्लुकोज र इन्सुलिनको स्तरको एक्कासि वृद्घिलाई मन्द पार्छ । पाचनसम्बन्धी विकारमा समेत कोदो उपयोगी मानिएको छ । यसले गर्दा ग्यास्ट्रिक अल्सर र कोलोन क्यान्सरको सम्भावनामा समेत कमी आउँछ । यसमा भएको रेसाले कब्जियत, अत्यधिक ग्यासलाई दूर गर्छ । यो रेसाले गहुँ र मकैको आटा सेवन गर्नेहरूको दाँजोमा इसोफेजियल क्यान्सर हुने सम्भावनामा समेत कमी ल्याउँछ । कोदोको नियमित उपयोगले क्यान्सरको जोखिमलाई समेत कम गर्न सक्छ । यो फेनोलिक एसिड, टयानिन र फाइलेट प्रशस्त भएको खाद्यपदार्थ हो ।
नेपालको कुल क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग कि.मि. रहेको छ । उक्त क्षेत्र मध्य हिमाली क्षेत्र ५१,१८७ वर्ग कि.मी. (३५.०५), पहाडी क्षेत्र ६१,३४५ वर्ग कि.मी. (४२.०५) र तराई क्षेत्र ३४०१९ वर्ग कि मी (२३.०५) रहेको छ । भु(उपगको दृष्टिकोणले जम्मा खेती गरिएको क्षेत्रफल ३०९१००० हेक्टर र खेती नगरिएको खेती योग्ग जमिन १०३०००० हेक्टर रहेको छ ।
कुल जनसंख्याको कृषिमा संलग्न जनसंख्या ६५.६५ प्रतिशत रहेको छ । माथिको तथ्याङ्गलाई हेर्ने हो भने कृषिमा दुई तिहाई जनसंख्या आश्रित भएको देखिए पनि खाद्यान्नमा नेपाल परनिर्भर नै छ । आ.व. २०७४र७५ लाई हेर्ने हो भने २ लाख ६३ हजार ४ सय ९७ हेक्टर क्षेत्रफलमा कोदो खेती गरिएको छ भने ३ लाख १३ हजार ९८ सय ७ मेट्रिक टन कोदो उत्पादन भएको छ जसको उत्पादकत्व १.१९ रहेको छ ।
कोदो खेती गर्दा धेरै जसो स्थानिय जातहरुको प्रयोग हुने भएकोले उन्नत जातहरुको तुलनामा उत्पादकत्व कम छ । नेपालको कुल जनसंख्या मध्य झण्डै आधा जनसंख्या पहाड तथा उच्च पहाडमा बस्छन् र तिनीहरुको मुख्य खाना पनि कोदो रहेको छ । कोदो परम्परागत रुपमा खेती गरिने पहाडको एक महत्वपूर्ण बाली हो । त्यस्तै २५ प्रतिशत घर परिवारले दैनिक रुपमा कोदोको खेती हुन्छ । उन्नत जात र उन्नत प्रविधिको प्रचार प्रसारमा बढावा दिन सके खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको लागि ठूलो टेवा पुग्नेछ । एकातिर उच्च पहाडी क्षेत्रहरुमा वर्षेनी ठूलो धनराशी खर्च गरी चामल ढुवानी भइरहेको छ र जुन सहज र सुलभ रुपमा सबैले प्राप्त हुन कठिन भइरहेको छ । यो दिगो उपाय पनि होइन । तैपनि राज्यको दायित्व ती क्षेत्रका जनतालाई स्थानीय तहमा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गरेर आपूर्ति गर्ने वा बाहिरवाट खाद्यान्न ढुवानी गरी आपूर्ति गर्न पर्‍यो ।
कोदो एक सुख्खा सहन सक्ने बाली हो र नेपालमा आकाशे पानीको भरमा यसको खेती गरिन्छ । यसको खेती समुन्द्री सतहबाट २३०० मिटर उचाइसम्म खेती गर्न सकिन्छ । नेपाल पहाडी क्षेत्र बढी भएको देश हो। यहाँ धेरै फाँट तथा टारहरु छन् । यी क्षेत्र कोदो खेतीका लागि उपयुक्त क्षेत्र हुन् । यी टारहरुमा राम्रोसँग कोदो खेती गर्न सकेमा प्रशस्त मात्रामा उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ । धान मकै जस्ता बालीहरु असिंचित क्षेत्रमा राम्रोसँग उत्पादन हुन नसक्ने भएकोले त्यस्ता क्षेत्रमा कोदो राम्रोसँग गर्न सकिन्छ । यो कम लागतमा उत्पादन हुन सक्ने भएको हुँदा विपन्न कृषकको लागि यो बाली उपयुक्त छ । खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि यो ज्यादै महत्वपूर्ण बाली हो ।
नेपालमा जनसंख्याका हिसाबले पहाडी तथा उच्च पहाडी क्षेत्रहरुमा ब्राहमण, क्षेत्री, गुरुङ, मगर, लामा, शेर्पा, राई, लिम्बु, तामाङ जातिहरुको बाहुल्यता रहेको पाइन्छ । यहाँका मध्य तथा उत्तरी क्षेत्रका मानिसको मुख्य खाना कोदो नै हो र यसले धेरै मानिसको प्राण भर्ने काम गरिरहेको छ । एकातिर उच्च पहाडी क्षेत्रहरुमा वर्षेनी ठूलो धनराशी खर्च गरी चामल ढुवानी भइरहेको छ र जुन सहज र सुलभ रुपमा सबैले प्राप्त हुन कठिन भएको छ । यो दिगो उपाय पनि होइन । तैपनि राज्यको दाइत्व त्यी क्षेत्रका जनतालाई स्थानीय तहमा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गरेर आपूर्ति गर्ने वा बाहिरबाट खाद्यान्न ढुवानी गरी आपूर्ति गर्नु पर्‍यो ।
त्यस्तै राजमार्ग वरिपरी रहेका विभिन्न होटल तथा रिसोर्टहरुमा स्थानीय खानाको रुपमा कोदोको ढिंडोे रोटी अर्गानिक तरकारी लोकल कुखुराको मासु तथा कोदाको लोकल रक्सीले बसमा यात्रु तथा पर्यटकलाई स्वागत गर्न सकेमा उपभोक्ताहरु पनि सन्तुष्ट हुने र पर्यटन व्यापार पनि फस्टाउने हुँदा कृषकको आम्दानी वृद्धि हुने तथा रोजगारीको अवसर पनि बढ्नेछ । त्यसैले दीगो उपायका लागि पहाडी क्षेत्रमा स्थानीय तहमा उत्पादन हुन सक्ने कोदो मकै जौ फापर आदिको उपयुक्त अनुसन्धान र विकासनै हो । यो मध्ये कोदो पनि एक महत्वपूर्ण बाली हो जसले यो समस्याको हल गर्न सक्छ । सानैदेखि भात मात्रै खाने परम्पराले आजभोली कोदोका परिकारहरु नरुचाउनु र रुढिवादी संस्कारको कारण कोदोलाई हेला गर्ने प्रचलन बढेको छ जुन एकदमै गलत हो ।
यसमा रहेका खाद्यतत्व र फाइदाजनक पक्षहरुको बारेमा जनचेतना वृद्धि गरी प्रचार प्रसार गर्न र खाने बानीको व्यवहारमा विविधिकरण गरी नयाँ पुस्ता सबै कोदाको परिकारतर्फ आकर्षित हुन सक्दछन् । जसले गर्दा स्थानीय बालीको पनि सदुपयोग र खाद्य असुरक्षा सम्बन्धी समस्या पनि समाधान हुन सक्छ । त्यस्तै राजमार्ग वरिपरी रहेका विभिन्न होटल तथा रिसोर्टहरुमा स्थानीय खानाको रुपमा कोदोको ढिंडोे रोटी अर्गानिक तरकारी लोकल कुखुराको मासु तथा कोदाको लोकल रक्सीले बसमा यात्रु तथा पर्यटकलाई स्वागत गर्न सकेमा उपभोक्ताहरु पनि सन्तुष्ट हुने र पर्यटन व्यापार पनि फस्टाउने हुँदा कृषकको आम्दानी वृद्धि हुने तथा रोजगारीको अवसर पनि बढ्नेछ ।
सरकारको तर्फबाट पनि यसको उत्पादन वृद्धिका लागि कोदो प्रवद्र्धन कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । त्यस्तै क्षेत्रफलका हिसाबले पकेट ब्लक सञ्चालन गर्न समिति बनाएर कृषकलाई सहुल्यत दरमा बीउ, मल कृषि सामग्री वितरण गर्न सके झनै राम्रो उत्पादन हुन सक्ने र कृषकको आयस्थितिमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ । त्यसैले यस शुभ कार्यमा कोदो बालीको उत्पादन तथा प्रवद्र्धनमा काम गर्ने सबै सघंसस्था सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्य गरी अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।
लामो समयपछि वर्षा, किसान खुशी
२० पुष २०७७, सोमबार १७:२४
अध्ययन भन्छ, हिमाली सहरमा पानी जोगाउन ‘विदुर मोडल’ उपयोगी
१६ पुष २०७७, बिहीबार ०६:१२
किलोकै ५ हजार रुपैंयाँ काठमाडौंमा कुरिलो
१५ मंसिर २०७७, सोमबार ०७:४७
अन्ततः नआउने भयो बंगलादेशबाट रासायनिक मल:-
१८ कार्तिक २०७७, मंगलवार १९:३३
हाइब्रिड बीउ उत्पादन तथा बिक्री गरी बर्सेनि लाखौ आम्दानी:-
३० आश्विन २०७७, शुक्रबार ०७:२२
पाल्पामा बहुगुणकारी कालो धान खेतीप्रति आकर्षित
९ आश्विन २०७७, शुक्रबार १०:४५
आज पनि चट्याङ्ग र असिनासहित वर्षा हुने संभावना
४ बैशाख २०७८, शनिबार ०९:३७
टोखा नगरपालिकाका विद्यालय वैशाख ९ देखि बन्द हुने
३ बैशाख २०७८, शुक्रबार २०:२२
कोभिड देखिए विद्यालय बन्द गर्नू : काठमाडौँ महानगरपालिका
३ बैशाख २०७८, शुक्रबार १९:३१
पुस्तक विमोचन तथा चित्रकला प्रदर्शनी
१ बैशाख २०७८, बुधबार १८:५७
टोखाको स्रष्टा र खेलाडीलाई सम्मान
१ बैशाख २०७८, बुधबार ०६:२२
नानीमाया महर्जनको नयाँ नेवारी गीत सार्वजनिक:-
१ बैशाख २०७८, बुधबार ०३:३५
रगत अभाव हुन नदिन भोलि टोखामा खुल्ला रक्तदान कार्यक्रम हुने
३१ चैत्र २०७७, मंगलवार १९:३५
पत्रकारितामा अमूल्य योगदान पुर्याए बापत तीन पत्रकार सम्मानित:-
३० चैत्र २०७७, सोमबार १९:४२
शिवपुरीको सुईरे चौरमा रेस्लिङ प्रतियोगिता हुने:-
३० चैत्र २०७७, सोमबार ०९:२४
प्रदेश नं. ७ मा नेपाल स्काउटको अन्तराष्ट्रियस्तरको तालिम केन्द्र बनाउछु : लोक बहादुर भण्डारी
३० चैत्र २०७७, सोमबार ०५:५१
सबिता डंगोल, सुशान्त डंगोल, नविना श्रेष्ठ